शिल्पा पोखरललाई फेरी अन्याय भयो ! – Gazabkonews
शिल्पा पोखरल र छवि ओझाबिचको समस्याको समाधान कहिले होला रु यस्तो रहेछ भित्री तथ्य, के यि दुई मिलिसकेका हुन् रु यसो भन्छन् शिल्पाका वकिल, हेर्नुहोस् भिडियो
म्युचुअल फण्ड प्रति बदलियो लगानीकर्ताको दृष्टिकोण, किन भयो यस्तो? विगतका समयमा लगानीकर्ताको नजरमा नपर्ने म्युचुअल फण्डहरु एकाएक लगानीकर्ताको रोजाईमा पर्न थालेको छ। पछिल्लो समय म्युचुअल फण्डहरुप्रति लगानीकर्ताहरुको दृष्टिकोण बदलिएको छ। दोस्रो बजारको बारेमा खासै जानकारी नभएका र बजारका लागि समय दिन नसक्ने लगानीकर्ताहरुले मात्र म्युचुअल फण्डहरुमा लगानी गर्छन् भन्ने मनोभावनालाई पछिल्लो समयको बजारले पूर्णतया परिवर्तन गरेको छ।
नगन्य मात्रमा कारोबार हुने तीनै म्युचुअल फण्ड खरिद गर्न अहिले लगानीकर्ताको तानातान देखिन्छ। लामो अवधिको लागि पनि लगानी गर्न नरुचाउने फण्डहरु अहिले छोटो अवधिको लागि समेत लगानीकर्ताको छनोटमा पर्ने गरेको छ।
यो सबै फण्डले गरेको प्रगतिको कारण सम्भव भएको हो। शेयर बजारमा आएको बढोत्तरीसँगै फण्डहरुको आम्दानीमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। यसै अनुसार यस वर्ष फण्डहरुले आकर्षण लाभांशको घोषणा गर्ने लगानीकर्ताहरुको अपेक्षा छ।आर्थिक वर्ष शुरु भएसँगै नेपाल स्टक एक्सञ्चेजमा सूचीकृत सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) ले आफ्ना इकाइधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गर्न थालेका छन्।
यसपटक दास्रो बजारमा सूचीकृत फण्डहरुको लाभांश वितरण गर्न सक्ने क्षमता ३० प्रतिशतभन्दा पनि माथि रहेको जानकारहरु बताउछन्। बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरुले भन्दा पनि राम्रो लाभांश वितरण गर्न थालेपछि फण्डको इकाई खरिद गर्नतर्फ लगानीकर्ताहरु झुम्मिन थालेका हुन्। जसले गर्दा फण्डहरुको कारोबार दैनिक सर्किट लेभलमा हुन थालेको छ।
उक्त फण्डहरुको आम्दानी पनि शेयर बजारको घटबढमा नै आधारित हुन्छ। बजार बढ्दा फण्डको आम्दानी बढ्छ भने बजार घट्दा फण्डहरुको आम्दानीमा पनि गिरावट आउने गरेको देखिन्छ। फण्ड कुनै सीमित समयको लागि मात्र सञ्चालन भएको हुन्छ। नेपालमा बन्दमुखी म्युचुअल फण्ड नै बढी प्रचलनमा छन्। उनीहरु ७ देखि १० वर्ष अवधिका हुन्छन्। म्युचुअल फण्डहरुले विशेष गरी लामो समयसम्मको योजना बनाएर लगानी गर्ने गरेका हुन्छन्।
फण्डहरुको परिपक्व हुने अवधि ७ वर्षको भएतापनि आज दिनसक्ने क्षमता पुनः लगानी गर्ने गरेर ७ वर्ष पछि अझ धेरै प्रतिफल फिर्ता दिन सक्ने क्षमताको बन्ने फण्ड व्यवस्थापकहरुको भनाई छ। आधार मूल्यभन्दा पनि तल्लो मूल्यमा फालाफाल फण्डको इकाई खारिद गर्न पाईन थाले पनि लगानीकर्तालाई फण्ड
प्रतिको विश्वास घटेको थियो। बजारले उच्च रुपमा गरि लिएसँगै इकाई मूल्य वृद्धि भयो र फण्डहरुले शेयर बजारबाट मनग्य आम्दानी गरेको वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुँदापनि लगानीकर्ताको गुमेको विश्वास बढ्न सकेको थिएन। अहिले फण्डहरुले आफ्ना इकाईधनीहरुलाई प्रतिफल वितरण गर्ने घोषणा गर्न थाले पछि लगानीकर्ताको रोजाईमा पर्न थालेको छ। फण्ड प्रति लगानीकर्ताको गुमेको विश्वास फेरि जागेको छ।
आफ्नै ससुरा र आमाजुको पेलानबाट सँधैका लागि अस्ताएकी सबिता भण्डारीलाई न्याय दिलाउँछु भन्दै आए रवि लामिछाने